Fahamaizana tsena :: Kilan’ny afo ny fivarotana iray tetsy Analakely • AoRaha
Fahamaizana tsena Kilan’ny afo ny fivarotana iray tetsy Analakely
Nidonaka ny setroka, niredareda ny lelan’afo avy eo, tetsy amin’ny “pavillon” Analakely, omaly tokony ho tamin’ny 10 ora antoandro. Nirehitra ny fivarotana iray mivarotra akanjo sy kiraro.
Kila forehitra ny entana rehetra tao. Nieren-doza ny olona teo amin’ny manodidina. Fifampikasohan’ ny herinaratra no heverina ho nahatonga ny firehetana.
Nikatona ny ankamaroan’ny tsena teny amin’ny “pavillon” Analakely, indrindra ireo tsy mivarotra entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN), omaly. Niharamboina ny fivarotana iray tao afovoan-tsena. Nitangorona nijery sy nikasa hamonjy ny olona teny an-tsena saingy tsy nisy ny azo natao.
“Toa hoe fifampikasohan’ ny herinaratra teo amin’ny andrin-jiro teo akaikin’io fivarotana io no nahatonga ny afo. Teo amin’ny tafontrano no may voalohany. Tsy avotra ny entana noho ny fihidian’ny varavarana. Nihazakazaka namonjy teo ny mpivarotra tompon’ny tsena. Tombanana ho antapitrisany ariary maro ny teti-bidin’ny entana simba tao”, hoy ny vehivavy iray teny Analakely.
Niatrana teny an-toerana ny mpamono afo avy amin’ ny sampana mpamonjy voina. Haingana ny famehezana ny afo ka tsy niitatra tamin’ireo fivarotana hafa nifanila teo akaiky teo ny loza. Nandamina ny olona nitangorona ny mpitandro filaminana.
Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy maty voafaokan’ny fiara teo imason’ny vady aman-janany
Fisavana teny an-dalambe :: Voasakana ireo fiarakaretsaka sy taksibe